Umjovo Molding - Chapman Technology Co., Ltd.
Ingxenye ephumelelayo iqala ngokubunjwa okwenziwe kahle. Le nqubo eyinkimbinkimbi nenembile inquma izindleko zokukhiqiza kanye nomjikelezo wempilo futhi icubungula izinto ezisemqoka zokwakhiwa kwesikhunta ngenkathi inamathela kokucacisiwe kwengxenye ethile.
Kubhekwa njengenye yezindlela zethu ezinhlanu zokuphumelela, ukwakheka okufanele kwesikhunta nokwakhiwa kwesikhunta kuzosiza ukunciphisa izindleko, kukhuphule ikhwalithi nokwenza ngcono ukusebenza. UMenzi weChapmaninkampani ingasekela izinhlelo zokusebenza zokwakhiwa kwesoftware ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS njalonjalo. Vele, singakunikeza ngezinhlobonhlobo zamazinga wokuklanywa kwesikhunta: i-DME, i-HASCO, i-MEUSBURGER, i-LKM, kanye nokuhlaziywa kwe-moldflow ukuhlola yonke imiklamo yesikhunta nezingxenye ngaphambi kokuthuthuka.
UMenzi weChapman izakhiwo zokubumba zinikeza ukuguquguquka ekusebenzeni kwazo zonke izinhlobo zezinto ezisetshenziswayo ze-thermoplastic. Sisebenza ngokukhiqiza imikhiqizo yezinhlobo ezahlukene zezicelo kanye nezimboni ezithile ezibandakanya i-Automobile, ezokwelapha, imishini ye-elektroniki, izixhumi, izimboni, ezokuvikela, ezokuthutha kanye nomthengi.
UMenzi weChapman Inkampani inomshini wokujova osuka kumathani angama-90 kuye kwangama-600, Singakusiza ekwenzeni ngcono futhi uthuthukise ukwakhiwa komkhiqizo wakho ukufeza imiphumela emihle kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zakho zento.
Amakhono Wokubumba Okubalulekile
1.Large eziyinkimbinkimbi Molding
2.Small ngokunemba Molding
3. Faka ukubumba nangaphezulu kokubumba
4.LSR & Rubber udini
Ithimba lethu ku UMenzi weChapmansisebenzisana kakhulu nabalingani bethu bebhizinisi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezengeziwe zenani lezimboni ezihola izinto eziyinkimbinkimbi. Ngezansi kukhona ezimbalwa zalezi zinsizakalo ezengezwe inani:
• Imihlangano Yezinto Eziningi
• Ukulungiswa Kwesikhunta Nokunakekelwa
• Uhlelo Lokudlulisa Isikhunta nezinqubo
• Ukushisela kwe-Ultrasonic
• I-Kanban, Izinhlelo Zokugcina, njll.
• Siza Ekuvuseleleni Imizamo
• Ukuhlobisa Ingxenye
• Imibala Ngokwezifiso nombala osheshayo wokushintsha